Gbalịa Kaadị na Youtube ịbawanye njikọ aka na ndị na-ekiri | Martech Zone
Gbalịa Kaadị na Youtube ịbawanye njikọ na ndị na-ekiri
Site na ọtụtụ nyocha na nyocha dị ka nke ha dị na Youtube, ọ dị ka enwere ohere furu efu site na ịghara inwe usoro ntụgharị ka mma agbakwunyere na vidiyo Youtube. Youtube ewepụtala kaadị iji weta mmekọrịta ndị ọzọ ebe onye na-emepụta vidiyo nwere ike itinye oku na ntinye na vidiyo ha na vidiyo. Otu ihe edere - Kaadị anaghị arụ ọrụ na mgbakwunye na nke ugbu a CTA overlays dị na Youtube.
Nke a bụ Nchịkọta nke Kaadị Youtube
Hụ na ịpịrị bọtịnụ “i” n’elu akuku aka nri ka ị hụ ka kaadị si arụ ọrụ.
Maka Kaadị na-arụ ọrụ n'agbanyeghị ma mmadụ ọ na-arụ ọrụ na desktọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka, ọ bụrụ na ị tụọ ha aka na vidiyo gị, ọ nwere ike ghara ị kwụ n'ahịrị dịka o kwesiri. Agbanyeghị, bọtịnụ ozi na-egosipụta mgbe niile na akuku aka nri aka nri. Nke a dị mma - na - ekwenye ma mmadụ ọ na - elele na Youtube ma ọ bụ site na vidiyo agbakwunyere na saịtị ebe.
Ikwu eziokwu, Amaghị m na ole folks ga-aga n'ụzọ ha pịa bọtịnụ ahụ, agbanyeghị. Enwere m mmetụta na ọtụtụ mmadụ ga-atụ uche ya kpamkpam. Echere m na mmeghari ka mma gaara abụ inwe usoro iheomume ebe a manyere Kaadị gị ileba anya ka ndị mmadụ wee nwee ike ịhụ ya mgbe oge ahụ ziri ezi. Ma hey - ọ bụ ihe mara mma na usoro nke ziri ezi. Youtube na-eme atụmatụ na ịga n'ihu ma na-eme ka usoro ahụ dị ka ha hụrụ otú e si eji ha eme ihe.
Nwere ike ịhọrọ site na ụdị kaadị isii: Ngwongwo ahia, Nchịkọta ego, Video, Listi ọkpụkpọ, Associated weebụsaịtị na Fan Fan. Ọ bụrụ na akaụntụ gị dị mma na ị bụ onye nwe ọdịnaya vidiyo ị na -ekere, ị ga-ahụ nke ọhụrụ Kaadị taabụ gị Video Editor ike na dezie ha n'oge ọ bụla.
Williams-Sonoma na Visa VISA Iji Kaadị Youtube
Ebe ọpụpụ Visa na Williams-Sonoma amalitela mgbasa ozi ahia na usoro vidiyo nke anakpo Oge na-atọ ụtọ oge ọkọchị na nkwado nke nnweta Visa Ọpụpụ, Visa ngwa ngwa na ọrụ ndenye ọpụpụ online, na www.Williams-Sonoma.com.
Usoro vidiyo bụ ụlọ ahịa na Kaadị Youtube - ikwe ka ndị na-ekiri ha zụta ngwaahịa ndị a gosipụtara ngwa ngwa na ngwa ngwa site na ịpị kpọmkwem site na vidiyo-na-eme Visa Checkout, ya na Williams-Sonoma, otu n'ime ụdị mbụ iji teknụzụ. E kere vidio ndị ahụ na mmekorita ya Tastemade, Ntanetị usoro ndụ ndụ ụwa maka nyiwe dijitalụ, na ndị na-ahọpụta ndị na-eme ihe ike ga-enye ndị na-ekiri ndụmọdụ na usoro iji kwado oriri ezumike zuru oke.
Site na Visa Checkout, ndị ahịa na-ahụ maka ịntanetị Williams-Sonoma nwere ike ịzụta ihe niile ha chọrọ iji nọrọ na nnọkọ oriri na ọ ultimateụ ultimateụ nke kachasị-niile nwere obere ịpị aka.
Tags: Associated weebụsaịtịkpọọ n’ọrụctaEgo Fanmmefu egodịkwuo youtube njikọVidio Ahịangwá ahịaplaylistyoutubekaadị youtubeyoutube ctayoutube video nchịkọta akụkọ
Mmezu IDS: Wlọ Nkwakọba Ihe Na-agbanwe agbanwe na Mmezu